Ko chii chinonzi Evhangeri yemvura noMweya?
MuApostora Pauro akataura kuti, “Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamuchiravo, kuti Kristu wakafira zvivi zvedu, sezvakanyorwa paMagwaro; vuye kuti wakavigwa, akamutswa nezuva retatu, sezvakanyorwa paMagwaro.” (1 VaKorinte 15:3-4). Ko, shoko rokuti “Magwaro,” mumutsetse wokuti “Kristu wakafira zvivi zvedu, sezvakanyorwa paMagwaro,” rinorevei? Rinoreva Testamente Yakare. MuApostora Pauro akataura kuti Jesu akafira zvivi zvedu zvose sezvinobva pachipikirwa uye nepazvakazarurwa zveTestamente Yakare. Ko, akayananisira zvivi zvedu zvose nenzira ipi? Akazviita kuburikidza nechiito chake chokururama: Rubhapatidzo rwake uyezve nerufu rwake paMuchinjikwa.
Unozivei kuti panguva yekereke yokuvambira, kwakanga kusina Kisimusi, kudzamara pamugumo we-century yechipiri. VaKristu vokutanga, pamwe nevaApostora, vaingorangarira zuva raNdira 6 se“zuva rokubhapatidzwa kwaJesu,” badzi, uye ndiro zuva badzi rokurangarira rakanga richicherechedzwa nekereke yokuvambira.
Nemhaka yeiko vaApostora vayiisa chisimbiso chikuru parubhapatidzo rwaJesu? Nokuti ndicho chakavanzika cheEvhangeri yemvura noMweya, iyo yavakagamuchira kubva kuna Jesu, uye vakaiparidzira kunyika. Jesu akati, “Kana munhu asingaberekwi nemvura noMweya, haangagoni kupinda muvushe bgaMwari” (Johane 3:5). Bhaibheri rakataura kuti Jesu wakavuya nemvura neropa kuti azotiponesa pazvivi zvedu zvose (1 Johane 5:6). Ropa zvinoreva Muchinjikwa; ko, zvino mvura inorevei?
(Ndinovimba kuti hauzovi nokuvhiringidzwa nerubhapatidzo rwemvura rwevatendi, neRubhapatidzo rwaJesu. Ndapota batisisa, zvakakwana, zvinoreva rubhapatidzo rwaJesu. Zvino, hatisi kuzobata nezverubhapatidzo rwemvura, rwevatendi, kana nezvedaviro/dzidziso yerubhapatidzo rwekupa vupenyu bgutsva.)
Nenhaka yei Jesu akabhapatidzwa naJohane Mubhapatidzi? Nemhaka yei Jesu akadudza bhapatidzo yake seya“kafanira kuti tizadzise kururama kwose?” (Mateo 3:15)
VaHeberu 10:1 inotaura kuti, “Nokuti murairo zvaunomumvuri wezvinhu zvakanaka zvinovuya…” Ngaticherechedzei pachibairo chomene chakapiwa naMwari kuvanhu vake, kuti vaponeswe, panguva yeTestamente Yakare. Kana munhu achinge atadza, akava nemhosva, mutadzi uyu aipira chipiriso chezvivi kuti aite ruyananisiro rwezvivi zvake. Ngatitarirei pana Revitiko 1:3-5. “Kana chipo chake chiri chipiriso chinopiswa chen’ombe, unofanira kuvigira mukono usinemhosva; ngaachibayire pamukova wetente rokusongana, kuti agamuchirwe pamberi paJehova. Zvino ngaaise ruvoko rwake pamsoro wechipiriso chinopiswa, kuti chigamuchirwe panzvimbo yake, chimuyananisire. Ngaabaye nzombe pamberi paJehova, vanakomana vaAroni, vaprista, vagovuya neropa, vasase ropa kunhivi dzose dzeartari, iri pamukova wetente rokusongana.” Pano, tinogona kuvona kuti chipiriso chezvivi chaifanira kuzadzisa zvisungo zvitatu zviri pazasi, kuti chive pamurairo, pamberi paMwari.
(1) kuvigira mhuka yokubaira isinemhosva (v. 3).
(2) kuisa mavoko ake pamusoro wechipiriso chokupisa (v. 4).
(3) kuvuraya (kubudisa ropa) chibairo, kuti chimuyananisire pazvivi zvake (v. 5).
Pamagwaro ari pamusoro awa, tinofanira kutondesa murairo waMwari, wokuti zvivi zvaifanira kutambidzwa pamusoro wemhuka yechibairo nenzira yokuisa mavoko, mhuka yechibairo isati yawurawa. Unogona kuwana zvirevo zvizhinji kwazvo zvinoti “kuisa mavoko pamusoro wechipiriso chezvivi,” kuitira kuregererwa kwezvivi, kubva muzvitsauko zvemberi zvebhuku yaRevitiko. Revitiko 16:21, “Aroni agoisa mavoko ake ose pamusoro wembudzi mhenyu, ndokurevurura pamsoro payo zvakaipa zvose zvavana vaIsraeri nokudarika kwavo kwose, izvo zvivi zvavo; ngaazviise pamusoro wembudzi, ndokuiregedza, itumwe kurenje nomunhu wakanga arairwa.”
Apo Aroni, muprista mukuru, ayiisa mavoko ake pamusoro wembudzi, zvivi zvose zvavaIsraeri zvaitambidzwa pamusoro wembudzi iyi. Apo mutadzi ayiisa mavoko ake pamusoro wechibairo, zvivi zvake zvaive nokutambidzwa pamusoro wacho. Nenzira imwecheteyo, kana munhu achigadzwa muvuprista, mufundisi anoisa mavoko ake pamusoro wemunhu, kuti ave nokuisa vuprista kwaari. Naizvozvo, “kuisa mavoko” chakanga chiri chiito chokutambidza zvivi kuchibairo. Zvinoreva kuti “kutambidza pa..”
Mhuka inozofanira kubva yawurawa, kuburikidza nokuiburitsa ropa, “nokuti vupenyu bgenyama bguri muropa… nokuti iropa rinoyananisira nokuda kwovupenyu bguri’mo.” (Revitiko 17:11).
Zvisinei, vaIsraeri vakanga vanevutere bgokuti vanatsirwe zvivi zvavo zvose, sezvo vaisakwanisa asi kutongotadza zuva rimwe nerimwe, kudzamara vafe, kunyange zvazvo vaipira zvipiriso zvezvivi, nguva yoga yoga apo vaitadza. Saka, Mwari wakazarura umwe mukana wekuti vave nokuregererwa zvivi zvavo zvegore rose, kamwechete pagore. Rakanga riri bira reZuva roKuyananisira. PaZuva roKuyananisira, Aroni, muprista mukuru, wayiisa mavoko ake pamusoro wembudzi yaAzazeri, kuti atambidze zvivi zvegore zvavaIsraeri vose, kamwechete (Revitiko 16:21).
Aroni akanga ari mumiriri wavaIsraeri, panguva iyoyo, nokuti (ndiye) ayiisa mavoko ake pamusoro wembudzi, pachinzvimbo chavaIsraeri vose. Kana iye pachake achinge aisa mavoko ake pamusoro wembudzi, zvivi zvose zvegore zvavaIsraeri (avo vaiva nehuwandu hwemamiriyoni maviri kana matatu) zvaitambidzwa pamusoro wembudzi yaAzazeri, kuburikidza nekuita kwake kwepamurairo. Wakanga uri murairo wavanhu wokusingaperi (Revitiko 16:29).
Wakanga uri “mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinovuya” (VaHeberu 10:1). Zvino, Mwari wakazadzisa “zvinhu zvakanaka zvinovuya” kuburikidza naJesu Kristu. Ngatitarirei kuti Jesu Kristu wakazadzisa sei chipikirwa chake.
Chokutanga, Mwari Baba vakatuma Jesu Kristu, nenzira yemunhu asinechivi, segwayana raMwari rechipikirwa. Ndiye Mwanakomana woga waMwari, uye ndiye Mwari Mutsvene zvakare. Saka, akanga akafanira kuti ave Chibairo chevanhu vose, chisinezvivi.
Chechipiri, akabhapatidzwa naJohane Mubhapatidzi muRwizi Jorodani. Pano, tinofanira kuziva kuti ndiyani anonzi Johane Mubhapatidzi, uyo akabhapatidza Jesu. Johane Mubhapatidzi wakanga ari wedzinza raAroni, muprista mukuru. Muprista Zakaria, baba vaJohane, akazvarirwa mugovero yaAbija, muzukuru waAroni (Ruka 1:5, 1 VaKoronike 24:10). Saka Johane Mubapatidzi akanga ari wedzinza raAroni, muprista mukuru. Izvi zvinoreva kuti akanga aine kodzero yokuva muprista mukuru. yevo, Jesu wakatsinhira Johane semukuru kuvanhu vose. “Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kunavakaberekwa navakadzi, hakuna kumuka mukuru kuna Johane Mubhapatidzi. Nokuti vaprofita vose nomurairo vakaprofita kusvikira kunaJohane” (Mateo 11:11, 13). Izvi zvinoreva kuti Johane ndiye Muprista Mukuru wokupedzisira, panyika, uye arivo mumiriri wepamurairo wevanhu vose, uyo wakapikirwa pamwe nokupiwa naMwari.
Testamente Yakare yakaprofita pamusoro pake. “Tarirai, ndinotuma nhume yangu, iye uchandigadzirira nzira yangu pamberi pangu” (Maraki 3:1). “Rangarirai murairo waMosesi muranda wangu, wandakamuraira paHorebi, wavaIsraeri vose, izvo zvandakatema nezvandakaraira. Tarirai, ndichakutumirai muprofita, Eria, zuva iro guru raJehova, rinotyisa, risati rasvika. Iye uchadzorera moyo yamadzibaba kuvana, nemoyo yavana kumadzibaba avo, kuti ndirege kuvuya ndirove nyika nokutuka” (Maraki 4:4-6). Jesu akati, “Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria wakanga achinzi unovuya” (Mateo 11:14).
Johane Mubhapatidzi ndiye Eria wakanga achinzi unovuya, uye akadzorera vanhu vose kuna Jesu Kristu, achivaita kuti vagadzirire kuzomugamuchira. Akaberekwa, mwedzi mitanhatu Jesu asati azvarwa. Akapa rubhapatidzo rwekutendeuka kuvanhu, ari murenje, kuti avagadzirire nzira yaShe. Aifanira kutungamira vanhu kuti vayeuke murairo uyevo netsika yokubaira yeTestamente Yakare, kuti ave nokuvagadzirira pakuvuya kweMuponesi wavo Jesu Kristu. Naizvozvo, akabhapatidza vanhu, akavaita kuti vazive kuti Muponesi uchazovuya nenguva pfupi, kuti azobvisa zvivi zvose zvenyika, nenzira yokuisa mavoko. Rubhapatidzo rwaJohane rwakanga rwuri rwokudana vatadzi kuti vadzoke kuna Mwari. Vanhu vazhinji kwazvo vakanzwa mashoko aMwari kuburikidza naJohane, vakabva vasiya zvifananidzo zvavo vakabva vadzokera kuna Mwari, vachipupura zvivi zvavo.
Jesu akabva auya kuna Johane, achibva Garirea, paJorodani, kuti abhapatidzwe naJohane Mubhapatidzi. Jesu akati, “Chirega hako zvino, nokuti saizvozvo zvakafanira kuti tizadzise kururama kwose” (Mateo 3:15). Pano, kuti kururama kwose ndiko kuti “dikaiosune” muchiGiriki, uye zvinoreva kuti “kutendeka, kana kuti kuenzanirana.” Izvi zvinoreva kuti Jesu akaponesa vatadzi vose pazvivi zvavo, nenzira yakaenzanirana, uye yakatendeka, zvamazvirokwazvo. Kuti ave nokudzikinura vatadzi vose pazvivi zvavo, nenzira yakaenzanira uye yakatendeka, zvamazvirokwazvo; Jesu aifanira kubvisa zvivi zvavo zvose, kuburikidza no“kuisa mavoko” sezvinobva pachipikirwa, icho chakaitwa naMwari muTestamente Yakare. Yakanga iri nzira yakanyanyofanira yokuti abvise zvivi zvose zvevanhu, kuburikidza nokugamuchira rubhapatidzo kubva kuna Johane. Nokuda kwekuti Jesu akatora zvivi zvose zvenyika, kuburikidza norubhapatidzo rwake, pazuva rakatevera Johane Mubhapatidzi akapupura achiti, “Tarirai, Gwaiana raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika” (Johane 1:29). Johane wakare akava nokubata bhapatidzo pana Jesu, kuburikidza nokuisa mavoko. Panguva iyo Johane akaisa mavoko pamusoro waJesu Kristu, zvivi zvose zvavanhu zvakava nokutambidzwa kwaari (Jesu), sezvinobva pamurairo waMwari.
Chechitatu, akaroverwa kuti zvivi zvedu zviregererwe. Asati afa, akati, “Zvapera” (Johane 19:30). Akadeura ropa rake rose nokuda kwemubairo wezvivi zvedu. Uye akava nokumutswa kuvakafa nezuva retatu, akabva akwira Kudenga. Akadzima zvivi zvose zvenyika, zvachose, nerubhapatidzo rwake, uye neropa rake repaMuchinjikwa.
MuApostora Pauro akataura kuti, “Kristu wakafira zvivi zvedu, sezvakanyorwa paMagwaro” (1 VaKorinte 15:3). Zvino, wava kunzwisisa kuti mhuka yechibairo yaipirwa sei here, kuitira kuregererwa kwezvivi, muTestamente Yakare, uye kuti nemhaka yei wakanga uri mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinovuya?
Pakanga pachifanira kuva ne”kuiswa mavoko,” mhuka yechibairo isati yawuraiwa. Kana munhu akadarikira “kuisa mavoko pachibairo,” apo achipira chipiriso chezvivi, haaikwanisa kuregererwa zvivi zvake nokuda kwekusatevera murairo. Mwari haana kumbova nokugamuchira zvibairo zvisiri pamurairo, zvakadaro. Zvakanga zvisiri pamurairo kuti (munhu) apire chibairo achidarikira kuisa mavoko ake pachiri.
Jesu wakavuya panyika pano kuti anatse zvivi zvedu zvose, kuburikidza nechiito chake chokururama (VaRoma 5:18). Chiito chake chokururama chaiva chokuti; akabhapatidzwa naJohane Mubhapatidzi, kuti abvise zvivi zvenyika, uye akaroverwa kuti aripire mubairo wezvivi. Wakavuya nemvura neropa. Asi irombo rakaipa kuti vaKristu vazhinji vanongoziva hafu badzi yechikamu chechiito chake chokururama. Tinofanira kuziva chikamu chose cheEvhangeri yemvura noMweya. Kutenda kwaari, uchisiya chikamu chakakosha cheEvhangeri yake, hazvisi pamurairo uye hazvina maturo.
MuApostora Johane akajekesa chikamu chose cheevhangeri yaShe, mutsamba yake yokutanga. “Ndiye wakavuya nemvura neropa, iye Jesu Krisu; haana kuvuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa” (1 Johane 5:6).
Tinozvarwa tiri vatadzi, uye tinotadza kudzamara tife. Hatingatogoni asi kutotadza, uye hatingagoni kutiza pakutonga kwaMwari. Isu vanhu, tose, takatondeswa kuenda kugehena, “nokuti mubairo wezvivi ndirwo rufu” (VaRoma 6:23). Asi zvivi pazvakawanda, nyasha dzakawanda nokupfuvurisa, “nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake, wakaberekwa mumwe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave novupenyu bgusingaperi” (VaRoma 5:20, Johane 3:16).
Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, wakavuya panyika pano seGwaiana raMwari. Akabvisa zvivi zvose zvenyika, apo akabhapatidzwa naJohane Mubhapatidzi muRwizi Jorodani. Somumiriri wevanhu vose, Johane wakaisa mavoko ake pamusoro waJesu, uye panguva yakare, zvivi zvose zvenyika zvakatambidzwa kuna Jesu. Saizvozvo, Jesu wakatora zvivi zvedu zvose, nerubhapatidzo rwake, ndokubva azvitakurira kuMuchinjikwa. Akadeura ropa rake rose rinoera, semubairo wezvivi zvedu, ndokubva ayananisira zvivi zvose zvenyika, zvachose.
Saka akadeedzera achiti, “Zvapera!” asati afira paMuchinjikwa. Chii chakanga chapedzwa naJesu? Zvivi zvose, uye nemutongo wazvo, zvakapedzwa nechiito chake chokururama; mune mamwe manzwi, takaregererwa pazvivi zvedu zvose kuburikidza nerubhapatidzo rwake, uye nokufira kwake paMuchinjikwa. Jesu Kristu wakadzima zvivi zvose zvenyika, makore ane zvuru zviviri apfuura, uye wakavamba nzira itsva yokurarama (VaHeberu 10:20). Zvino ndiyo nguva yenyasha dzake. Aninani unotenda kurubhapatidzo rwaJesu, pamwevo nekuMuchinjikwa wake, unogona kuva nokuregererwa pazvivi zvake zvose, uye unowana kugara kweMweya Mutsvene (Mabasa 2:38). Hareruya!
Zvino ticharevazve kuti kudini! Pane magwaro mazhinji kwazvo, muBhaibheri, anodudza rubhapatidzo rwake sechiito chokururama chaJesu chakafanira pakuponeswa kwedu (Mateo 3:13-17, 1 Pita 3:21, Johane 6:53-55, VaEfeso 4:5, VaGaratia 3:27, Mabasa 10:37, etc)
Ko, unotenda kuzvokwadi iyi here? Ko, hauna zvivi mumoyo mako here? Ko, Jesu akabvisa zvivi zvako zvose here, kubvira pawakaberekwa kusvika zvino? Ko, akabvisa zvivi zvako zvose, kubvira zvino kusvika pauchazofa, nerubhapatidzo rwake, makore anosvika zvuru zviviri apfuura here? Naizvozvo, wakaitwa mutsvene zvachose here, nekutenda murubhapatidzo rwake uye nemuropa rake?
ChiKristu, nhasi uno, chinofanira kuziva Evhangeri yemvura noMweya. Aninani anoda kuziva nezveEvhangeri yemvura noMweya zvine udzamu, ngaasazengurira kutaura nesu veNew Life Mission. Unogona kuwana mabhuku, pamwe nema e-book, aMufundisi Paul C. Jong pachena.